Web Design for Small Business | Handy Web
Home &sol; Web Design for Small Business
အွန်လိုင်းမှာ လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းအကြောင်းကို တင်ထားခြင်းဖြင့် မည်သူမဆို လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းရဲ့ ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းရှော့ပင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့ အကြောင်းအရာအပြင် Website ရဲ့ ဒီဇိုင်းအထားအသို ကိုကြည့်ပြီးတော့ လူတွေက ပထမချင်းမှတ်ချက်ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူကြီးမင်းရဲ့ Website က Professional ကျနေဖို့လည်းလိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ Handy Web ကနေပြီးတော့ လူကြီးမင်းလိုအပ်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်များကို လူကြီးမင်း အလိုရှိသော ပုံစံအတိုင်းဖြစ်အောင်လို့ ၀က်ဘ်ဆိုက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကာ လွှင့်တင်ပေးပါတယ်။ Web Design Package မှာ အောက်ပါ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Domain Name www.yourcompany.com
Email Address2email addresses (e.g. info@yourcompany.com) 50MB each
GoDaddy Account* +
CMS (WordPress)*** +
Graphic Design Logo, themes selection, images preparation for Web
Price 150000 MMK
* ကျွန်ုပ်တို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှုကို GoDaddy Pro ကနေတဆင့် စီမံခန့်ခွဲတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ GoDaddy Account တစ်ခု ရရှိပါမည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ကိုယ်ပိုင် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို လိုရင်လိုသလို တိုးချဲ့နိုင်တယ်၊ အခြား Web Developer တစ်ယောက်နဲ့လည်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
** cPanel ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ Web Hosting Account ကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရိုးရှင်းပါတယ်။ အခြားသော Web Application များကိုလည်း cPanel က တစ်ဆင့် Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။
*** CMS ဆိုတာ Content Management System ဖြစ်ပြီးတော့ ၀က်ဆိုက်ရေးဆွဲရာမှာ ကိုယ်ထည့်သွင်းချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ရုပ်ပုံတွေကို အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲအောင် ပြုလုပ်တဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်က စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
**** SEO ဆိုတာ Search Engine Optimization ဖြစ်ပြီးတော့ လူကြီးမင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို Google၊ Yahoo တို့လိုမျိုး Search Engine တွေကနေ အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်အောင် လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု အစီအစဉ်ထက် ပိုတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမျိုးလိုချင်ရင်တော့ ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေ၊ အွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းချင်ရင်တော့ Contact us! ကို သွားပါ။